ဂျပ်စတင် ဘီဘာ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Justin Bieber မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဂျပ်စတင် ဒရူး ဘီဘာ (Justin Drew Bieber)  (၁၉၉၄ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ဖွား) သည် ကနေဒါနိုင်ငံသား ခေတ်ပေါ် pop နှင့် R&B တေးသံရှင်ဖြစ်သည်။ ဘီဘာ၏ ယူကျု(ဘ်) (YouTube) ပေါ်ရှိ ဗွီဒီယိုအား ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စကူတာ ဘရောင်း (Scooter Braun)  က တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက်တွင် ဘီဘာ၏ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာသည်။ ဘရောင်းက ဘီဘာအား နာမည်ကျော် တေးသံရှင် အပ်ရှာ (Usher) နှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး မကြာမီတွင် အပ်ရှာနှင့် ဘရောင်းတို့ ပူးတွဲတီထောင်ထားသည့် Raymond Braun Media Group (RBMG) နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်သည်။ ထိုနောက်တွင် Island Records နှင့် တေးအယ်လ်ဘမ် ထုတ်ရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်သည်။
တေးသံရှင်၊ တေးရေးဆရာ၊ သရုပ်ဆောင်
အဆို၊ ဂီတာ၊ စန္ဒရား၊ ထရမ်းပက်
ဂျပ်စတင် ဘီဘာ၏ ပွဲထွက် single ‘One Time’ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတလွှား၌ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ယင်းသီချင်းသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အရောင်းရဆုံး ၁၀ စာရင်းတွင် ထိပ်မှလည်းကောင်း နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် အရောင်းရဆုံး ၃၀ စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပထမဦးဆုံးသော အယ်လ်ဘမ် ‘My World’ ကို ထုတ်ဝေရာ အမေရိကန်တွင် ပလက်တီနမ် ဓာတ်ပြား စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ ဂျပ်စတင် ဘီဘာသည်လည်း ဗွေဆော်အယ်လ်ဘမ်မှ သီချင်း ၇ ပုဒ် ‘ဘီလ်ဘော့ဒ် ရေပန်းစားသီချင်း (၁၀၀)’ စာရင်းဝင်ခဲ့သည့် ပထမဦးဆုံးသော တေးသံရှင်ဖြစ်သည်။
My World (၂၀၁၀)
My World 2.0 (၂၀၁၀)
Never Say Never – The Remixes (၂၀၁၁)
Under the Mistletoe (၂၀၁၁)
↑ ၁.၀ ၁.၁ Justin Bieber Biography & Awards။ Billboard။ Nielsen Business Media, Inc.။ 2010-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Farber၊ Jim။ "Justin Bieber, 'My World 2.0'"၊ New York Daily News၊ March 23, 2010။ 2010-06-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MTV- Justin Bieber artist profile။ MTV။ MTV Networks။ December 22, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Greenblatt၊ Leah။ "My World 2.0 (2010)"၊ Entertainment Weekly၊ Time၊ March 10, 2010။ June 11, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ allmusic ((( Justin Bieber > Overview )))။ Allmusic။ Macrovision Corporation။ October 21, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Justin Bieber makes them proud. But why??last=Konjicanin"၊ Vancouver Observer၊ December 24, 2010။ January 11, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Herrera၊ Monica (March 19, 2010)။ Justin Bieber – The Billboard Cover Story။ Billboard။ e5 Global Media။ May 7, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mitchell၊ Gail (April 28, 2009)။ Usher Introduces Teen Singer Justin Bieber။ Billboard။ e5 Global Media။ July 23, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Justin Bieber Fever Hits Miami"၊ CBS News၊ CBS Interactive၊ February 5, 2010။ March 27, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျပ်စတင်_ဘီဘာ&oldid=507461" မှ ရယူရန်
၂၁ မတ် ၂၀၂၀၊ ၁၉:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မတ် ၂၀၂၀၊ ၁၉:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။